सोधिने प्रश्न - Changzhou longxin मशीनरी कं, लिमिटेड
बालुवा मिल को चयन र खरिद मा ध्यान लागि आठ अंक
1.Rotor सामाग्री: बालुवा मिल को विधिहरू पीस मुख्य रूप दुई प्रकार मा विभाजित छन्: एक छडी-पिन प्रकार रोटर र पीस कोठामा छ, दोस्रो डिस्क प्रकार पीस छ। रड-पिन प्रकार को पीस प्रभाव डिस्क प्रकार को भन्दा धेरै राम्रो छ।
2.Cylinder सामाग्री: बालुवा मिल उद्योग मा, सबै भन्दा निर्माताहरु स्टेनलेस स्टील सामाग्री सिलेंडर चयन गर्नेछ। तर ग्राहक द्वारा पुष्टि गर्न आवश्यक छ, जो स्टेनलेस स्टील, विभिन्न प्रकारका छन्।
3.Equipment ठंडा र यांत्रिक छाप प्रभाव: यांत्रिक छाप प्रभाव राम्रो छ भने। यदि रिसाव अवस्था छ। कसरी लामो अनुमानित आयु छ। यी प्रश्नहरूको प्रमुख बिन्दु को परिसंचारी तरल पानी बनेको वा विलायक छ भने उत्पादन प्रक्रिया र आर्थिक घाटा मा प्रदूषित हुनबाट उत्पादन जोगिन गर्न पीस सामाग्री मा भंग गरिएको छ जो छ।
जिरकोनियम मोती र सामाग्री को लागि 4.Separation उपकरण: तेर्सो बालुवा मिल मा, पीस मध्यम मुख्य रूप जो गतिशील घन्टी र स्थिर घन्टी द्वारा बना अलग उपकरण सामाग्री अलग छ।
5.Operation मोड: मुख्य नियन्त्रण भाग सञ्चालन गर्न सजिलो छ।
6.Production दक्षता: व्यावहारिक संरचना डिजाइन उत्पादन दक्षता र उत्पादन गुणस्तर सुधार गर्न सक्नुहुन्छ
7.Safety सुरक्षा: चयन र बिजुली सामाग्री को गुणवत्ता सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्छ।
8.Replacement, रंग परिवर्तन हुँदै र सफाई Zirconium मोती को: के आत्म-सफाई प्रभाव बारे? यदि कोठामा पीस को डिजाइन मृत कोण बिना छ?
यी आठ अंक ग्राहकहरु जब छनौट र बालुवा मिल खरीद ध्यान गर्न आवश्यक छन्। आशा छ यो उपयोगी हुनेछ। र साथ Changzhou Longxin मशीनरी कं, लिमिटेड बिक्री तातो-लाइन परामर्श स्वागत: 0519-88608368
मसी उत्पादन तीन रोलर मिल को आवेदन
मिसिन पीस व्यापक धेरै उद्योग हाम्रो दैनिक जीवनमा कि सान्दर्भिक मा प्रयोग गरिन्छ। कारण प्रविधिको प्रगति गर्न, यो पनि निरन्तर विकास भएको छ। विभिन्न पीस मिसिन उत्पादन लाइन देखा। र मिसिन यी फरक किसिमको आफ्नै सुविधा र लाभ हाम्रो उत्पादन र जीवन राम्रो काम छ। तीन रोलर मिल व्यापक प्रयोग पीस मिसिन एक प्रकारको छ। यो तीन रोलर मिल मसी उत्पादन को लागि एक थप लाभप्रद उपकरण मिसिन छ भन्न थप योग्य हुनुहुन्छ। Hereinafter मसी उत्पादन समयमा तीन रोलर मिल को प्रयोग अवस्था छ।
पहिलो, तीन रोलर मिल को सञ्चालन सिद्धान्त:
तीन रोलर्स को सतह तेर्सो प्रबन्ध extruded छ र अलग गति को घर्षण एक निश्चित पीस प्रभाव हासिल गर्न प्रयोग गरिएको छ। तसर्थ, तीन रोलर मिल सामाग्री किनभने तीन रोलर्स को समारोह राम्ररी मुख्य रूप पीसने गर्न सक्नुहुन्छ। तल तीन रोलर मिल को सुविधाहरू मसी उत्पादन गर्दा हो।
सतह को कठोरता धेरै उच्च छ त्यसैले 1.The रोलर सामान्यतया चिसो-हार्ड मिश्र धातु डाली फलाम को अपकेंद्र कास्टिंग गरेको छ। तीन रोलर मिल एक उच्च शक्ति र पहनने प्रतिरोधी पीस मिसिन बलियो क्रूरता छ। तसर्थ, मसी उत्पादन को प्रक्रिया मा, रोलर को समारोह बाह्य दबाब र तापमान प्रभावित हुनेछ।
त्यसैले यसलाई5माइक्रोन भन्दा मसी सामाग्री को fineness कम गर्न, सही पीसने सक्नुहुन्छ यसरी वर्दी र उच्च गुणस्तर को ठीक उत्पादनहरु को रोलर को 2.The व्यास, उच्च सटीक संग भूमि छ।
तीन रोलर मिल को 3.The ड्राइव सिस्टम पनि विशेषता छ। यो बहु-लाइन sprocket नरम सुरु adopts। त्यसैले यो धेरै कुशल छ र हल्ला बिना सञ्चालन गर्दा चिकना। साथै, यो रोल दूरी समायोजन र सञ्चालन सजिलो र सही गर्न प्रकार हात-पाङ्ग्रा स्क्रू पंक्तिमा adopts।
4.Three रोलर मिल्स तेर्सो हात-पाङ्ग्रा स्क्रू नियन्त्रणमा द्वारा रोलर्स बीच अवकास समायोजन गर्नुहोस्। यो पनि सामाग्री को कण आकार समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो बाटो मा, पीस मसी को प्रक्रिया थप सुविधाजनक हुन्छन्।
5.The तीन रोलर मिल उत्पन्न जब रोलर काम गर्मी dissipate एक ठंडा उपकरण संग सुसज्जित छ।
शब्द, तीन रोलर मिल्स मात्र अति-ठीक प्रभाव हासिल गर्न सक्दैन, तर पनि उच्च दक्षता हासिल। यसको धेरै सुविधाहरू मसी को उत्पादन गर्न अनुकूल गर्न सक्षम छन्। तसर्थ, मसी उत्पादन मा तीन रोलर मिल्स धेरै होनहार छ।
तेर्सो Grinder को साधारण गल्तीलाई लागि समस्या निवारण
तेर्सो पीस मिसिन को पीस मिसिन परिवार, तेर्सो सञ्चालन सिलेंडर द्वारा विशेषता छ जो एक ember छ। दिनहुँ उत्पादन, यसलाई त्यहाँ केही गल्तीलाई हुनेछ अपरिहार्य छ, तर ती धेरै ग्राहकहरु निर्मूल गर्न सकिन्छ।
त्यहाँ यस्तो काम गर्न विफलता रूपमा पानी वितरण, समस्या छन् भने, तपाईं Solenoid वाल्व अड्केको वा क्षतिग्रस्त छ भने जाँच गर्न सक्नुहुन्छ, र त यदि यो प्रतिस्थापन गर्नुहोस्।
मोटर अड्केको छ भने, यो किनभने डायफ्राम पंप शक्ति ठीक समायोजित छैन सक्छ। यो त मोटर फेरि सुरु, फिल्टर दबाब कम गर्न बेल्ट प्लेट समायोजन गरेर हल गर्न सकिन्छ।
यदि डायफ्राम पंप प्रतिक्रिया गर्दैन, Solenoid वाल्व क्षतिग्रस्त छ भने जाँच गर्नुहोस्। को वाल्व रड अड्केको छ भने, पाइप को प्रवेश गर्न एक सानो ट्रांसफर्मर तेल थप्न र यो पाइप फिर्ता घुसाउनुहोस्। त्यसपछि दबाव वृद्धि र समस्या समाधान गर्न पंप शरीरमा ढक्ढकाउँछु।
दबाब गेज दबाब पनि उच्च छ भन्ने संकेत गर्छ भने, यो किनभने चलनी डिस्क अवरुद्ध छ र माथि साफ गर्न आवश्यक पर्दछ।
को ठंडा पानी whitening छ भने, सीलेंट संग एउटा समस्या हुन सक्छ।
रूसी असर स्थिति 60 भन्दा बढी ℃ हीटिंग छ, यो घिउ वा असर क्षति कमी हुन सक्छ, समय मा मरम्मत गर्नुपर्छ।